ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကလူတွေဟာ စားစရာမရှိတော့လို့ ကြွက်၊ မြွေနဲ့ အင်းဆက်တွေကို ဖမ်းစားနေကြရပါတယ်လို့ ရေးလိုက်တဲ့ စင်ကာပူသတင်းစာ
a fella | 24/10/2020 | News | No Comments
( သနားသလိုလို၊ ကရုဏာကြီးသလိုလိုနဲ့ ရေနစ်သူတွေကို ဝါးကူထိုးကာ ထပ်နှစ်ချင်တဲ့ သဘောလား စင်္ကာပူ သတင်းစာ….)
ဒါမျိုးအရေးအသားတွေဟာ မီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီမညီမသိပေမယ့် ဖတ်ရတာ အတော်စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
မြန်မာအစိုးရဟာ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဆင်းရဲသားတွေကို စားစရာအထုပ်တထုပ်တခါပေးခဲ့ပြီး၊ ၁၅ ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့ထောက်ပံ့ငွေ ၃ ကြိမ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတဝှမ်း လူ ၂၀၀၀ ကိုမေးကြည့်ခဲ့ရာ အိမ်ထောင်စုရဲ့ ၇၅% ဟာ စားစရာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ လိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ဖို့ ချေးငှားနေကြရပါတယ်။
နာမည်ကျော်သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ social welfare network ကောင်းကောင်းမရှိတာ၊ ပြည်ပရောက်မိသားစုဝင်တွေဆီကလွှဲငွေတွေ မလာတဲ့အခါ ပြည်သူကျောမွဲတွေမှာ ကျောပေါ်ကအင်္ကျီစုတ်တထည်ကလွဲပြီး ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မရှိကြရှာပါဘူးတဲ့လေ။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ စင်ကာပူလိုမချမ်းသာတော့ ပြည်သူကို ဘီလီယံရာနဲ့ချီပြီး မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရှာတာကို ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့စိတ်ရင်းနဲ့ သဒ္ဒါတရားတွေဟာ စင်ကာပူထက် အဆတစ်ရာမကသာပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
အစိုးရက အကန့်အသတ်နဲ့ရှိတဲ့အင်အားသုံးပြီး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသေးသ၍ ပြည်သူဟာ အစိုးရနဲ့ တသားတည်းရပ်နေကြအုံးမှာပါပဲ။ ငရဲကလာခဲ့ကြသူတွေမို့ ပြာပူကိုထူးမကြောက်တော့ပါဘူး။
သနားသလိုလို၊ ကရုဏာကြီးသလိုလိုနဲ့ ရေနစ်သူတွေကို ဝါးကူထိုးကာ ထပ်နှစ်ချင်တဲ့ သဘောထားမမှန်သူတွေကိုတော့ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ 😪
မူရင်း စင်္ကာပူ သတင်းစာလင့်
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ကြူးကြျောရပျကှကျကလူတှဟော စားစရာမရှိတော့လို့ ကွှကျ၊ မွှနေဲ့ အငျးဆကျတှကေို ဖမျးစားနကွေရပါတယျလို့ ရေးလိုကျတဲ့ စငျကာပူသတငျးစာ
( သနားသလိုလို၊ ကရုဏာကွီးသလိုလိုနဲ့ ရနေဈသူတှကေို ဝါးကူထိုးကာ ထပျနှဈခငျြတဲ့ သဘောလား စင်ျကာပူ သတငျးစာ….)
ဒါမြိုးအရေးအသားတှဟော မီဒီယာကငျြ့ဝတျနဲ့ ညီမညီမသိပမေယျ့ ဖတျရတာ အတျောစိတျပကျြစရာပါပဲ။
မွနျမာအစိုးရဟာ ကိုဗဈကာလအတှငျး ဆငျးရဲသားတှကေို စားစရာအထုပျတထုပျတခါပေးခဲ့ပွီး၊ ၁၅ ဒျေါလာနဲ့ညီမြှတဲ့ထောကျပံ့ငှေ ၃ ကွိမျပေးခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံတဝှမျး လူ ၂၀၀၀ ကိုမေးကွညျ့ခဲ့ရာ အိမျထောငျစုရဲ့ ၇၅% ဟာ စားစရာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ လိုအပျတာလေးတှဝေယျဖို့ ခြေးငှားနကွေရပါတယျ။
နာမညျကြျောသမိုငျးပညာရှငျဒေါကျတာကတော့ မွနျမာပွညျမှာ social welfare network ကောငျးကောငျးမရှိတာ၊ ပွညျပရောကျမိသားစုဝငျတှဆေီကလှဲငှတှေေ မလာတဲ့အခါ ပွညျသူကြောမှဲတှမှော ကြောပျေါကအင်ျကြီစုတျတထညျကလှဲပွီး ဘာမှပိုငျဆိုငျမှုတှေ မရှိကွရှာပါဘူးတဲ့လေ။
ကြှနျတျောတို့အစိုးရဟာ စငျကာပူလိုမခမျြးသာတော့ ပွညျသူကို ဘီလီယံရာနဲ့ခြီပွီး မထောကျပံ့ပေးနိုငျရှာတာကို ဝနျခံပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာ့စိတျရငျးနဲ့ သဒ်ဒါတရားတှဟော စငျကာပူထကျ အဆတဈရာမကသာပါတယျ။ တိုငျးပွညျဆငျးရဲတာ ရှကျစရာမဟုတျပါဘူး။
အစိုးရက အကနျ့အသတျနဲ့ရှိတဲ့အငျအားသုံးပွီး ကွိုးစားဆောငျရှကျနသေေးသ၍ ပွညျသူဟာ အစိုးရနဲ့ တသားတညျးရပျနကွေအုံးမှာပါပဲ။ ငရဲကလာခဲ့ကွသူတှမေို့ ပွာပူကိုထူးမကွောကျတော့ပါဘူး။
သနားသလိုလို၊ ကရုဏာကွီးသလိုလိုနဲ့ ရနေဈသူတှကေို ဝါးကူထိုးကာ ထပျနှဈခငျြတဲ့ သဘောထားမမှနျသူတှကေိုတော့ ဘယျလိုမှ လကျမခံနိုငျပါဘူး။ 😪
အခုထိရလဒ်များအရ NLD ဟာ အစီုးရ အေးအေးဆေးဆေးဖွဲ့နိုင်ပြီ။( ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်… )
ကင်မ်ဂျုံအန်၏ ချစ်သူဟောင်း ပေါ့ပ်ငွေကြယ်ပွင့်က ကင်ဂျုံအမ်ရဲ့ ဇနီးသည်၏နေရာတွင် ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ကင်ဂျုံအမ်မိသားစုကြား အာဏာလုပွဲ စပြီလား…. ( အာဏာလုပွဲမှာ ညီမနဲ့ ရည်စားဟောင်းကို ပွဲတည်ပေးပြီး ကြားကနေ ကုလားဖန်ထိုးနေတဲ့ ကင်ဂျုံအမ် …….)
တရုတ်နှင့်အီတလီတို့ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှီကျင့်ဖျင် တိုက်တွန်း ( အီတလီကို ကိုဗစ်အတွက် အကူအညီတွေပေးပြီး လုပ်မရအောင် ချုပ်လိုက်တဲ့ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်…)